युगसम्बाद साप्ताहिक - कहिलेसम्म छोरालाई बोर्डिङ र छोरी सरकारीमा ? – गीता श्रेष्ठ
Tuesday, 01.21.2020, 03:35pm (GMT+5.5) Home Contact
कहिलेसम्म छोरालाई बोर्डिङ र छोरी सरकारीमा ? – गीता श्रेष्ठ
Thursday, 04.04.2019, 01:30pm (GMT+5.5)
शिक्षामा हरेक नागरिकलाई समान अवसर र पहुँच दिन सकियो भने त्यो समाज छिट्टै उन्नत बन्दछ र यसबाटै देशले विकासको गति पक्डिन्छ । तर नेपालमा शिक्षामा समान पहुँच र अवसरको साटो विभेद कायम छ । मुलुकको शिक्षामा वर्गीय र लैंगिक विभेदले जरा गाडेको छ अनि यसमा लैंगिक असमानता पनि प्रचूर छ ।
नेपालको संविधानले नै शिक्षा प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनेको छ र सोही अनुसारको कानुन पनि बनेको छ तर संवैधानिक व्यवस्थाको पालना हुन सकेको छैन । राज्यदेखि घरसम्म शिक्षामा विभेद छ । शिक्षामा छोरा र छोरीबीच चरम विभेद छ र त्यस्तो विभेद पढेलेखेका, केही जान्ने–सुन्ने अनि शहरी सभ्यतामा रम्नेहरुबाटै बढी भएको पाइन्छ । यसको उदाहरणका रुपमा २०७५ को एसइईमा सामेल विद्यार्थीको संख्याका आधार मान्दा छोरा र छोरीमा कति विभेद छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
शिक्षामा छोरा र छोरीबीचको विभेद पढेलेखेका, केही जान्ने–सुन्ने अनि शहरी सभ्यतामा रम्नेहरुबाटै बढी भएको पाइन्छ । एसइईमा सामेल विद्यार्थीको संख्याका आधार मान्दासामुदायिक विद्यालयमा छात्रा र निजी (संस्थागत) विद्यालयमा छात्रको संख्या बढी छ । यो संख्या गाउँदेखि शहरसम्मै उस्तै छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा छात्रा र निजी विद्यालयमा छात्रको सख्या बढी देखिनुले शिक्षामा छोरा र छोरीको विभेद कायमै रहेको स्पष्ट देखाउँछ । परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक क्षेत्रका गरी कूल चार लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थीले आवेदन दिएकामा दुई लाख ३६ हजार ४ सय ४५ छात्र र दुई लाख ३८ हजार ५ सय ५८ छात्रा छन् । यसमा सामुदायिक विद्यालयका तीन लाख चार हजार १ सय ९६ विद्यार्थीमध्ये एक लाख ५८ हजार ३ सय ८९ छात्रा र एक लाख ४५ हजार ८ सय ७ छात्र छन् ।
हामीमा अझै पनि ठूलो भ्रम के छ भने बोर्डिङ पढेको छोराले भविष्यमा आफूहरुलाई हेर्छ । बोर्डिङ पढे पनि छोरीले त अर्काको घर स्याहार्ने हो । त्यसैल उसले अक्षर मात्र चिने पुग्छ ? यही मान्यताको शिकार नेपाली समाज भैरहेको छ । समानताका नारा घन्काएर असमान व्यवहार प्रदर्शन भैरहेको छ ।
समाजले एउटी छोरीलाई शिक्षित बनाउनु र छोरालाई शिक्षित बनाउनुको अन्तर समाजले केलाउनै सकेको छैन । यो ठूलो समस्या हो । अहिले पनि गाउँघरदेखि शहरसम्मै छोरीलाई पढाईसंगै घरका सारा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरुको एउटै मान्यता छ “छोरी अर्काको घर खाने जात हो, पढाई भन्दा घरधन्दामा बढी दक्ष हुनुपर्छ” । हो घरधन्दा पनि गर्नुपर्छ र पढाई पनि गर्नुपर्छ तर यो काम छोरीले मात्र हैन कि छोराले पनि गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का वा चेतना बाबुआमामा पटक्कै छैन । “छोरो त यत्रो सम्पत्तिको मालिक हो, किन दुःख गर्नुप¥यो” र भन्ने मानसिकताले नराम्रोसंग जरा गाढेको छ ।
मुलुकमा यति ठूलो राजनीतिक परिर्वत भैसक्दा पनि छोरा र छोरीमा विभेद गर्ने संस्कार कायम रहनु दुःखद पक्ष हो । यसलाई चिर्न प्रत्येक घरबाट अभियान चलाउनुपर्दछ । हरेक बाबुआमाले यस्तो विभेद नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ ।